चीन गनस्मिथ रिंच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - रोची
बन्दुक सफाई किट
बन्दूक सफाई सामान
बन्दुक बनाउने पञ्चहरू
गनस्मिथ बेन्च ब्लक
क्याप्सको साथ गनस्मिथ ह्यामर
गनस्मिथ फ्रन्ट साइट एडस्टर
गनस्मिथ ब्रोकन शेल एक्स्ट्रक्टर
शिकार र शूटिंग
शिकार र शूटिंग ब्रास क्याचर
शिकार र शूटिंग पत्रिका लोडर
शिकार र शूटिंग थूथन कभर
शिकार र शूटिंग गन बट बफ
शिकार र शूटिंग गन लक
शिकार शूटिंग गन ब्याग
स्टिल तार ब्रश
फिंगरप्रिन्ट गन सुरक्षित
डिजिटल गन सुरक्षित
बाहिरी रणनीतिक झोला
घर > उत्पादनहरू > बन्दुक बनाउने > गनस्मिथ रिंच
राइफलका लागि सानो रणनीतिक कपडा झोला बन्दुक सफा गर्ने किट
बोर सफाईको लागि कांस्य तार बन्दुक सफाई ब्रश
सेतो कपास स्क्वायर क्लथ गन सफा गर्ने मार्गहरू उच्च अवशोषित
बन्दुक सफा गर्ने ऊन पेलेट बेलनाकार केसहरू स्क्रू सँगै प्याक गरिएको
नट हटाउनको लागि गनस्मिथ रेन्च स्प्यानर नट रेन्च
नट हटाउनको लागि गनस्मिथ रेन्च स्प्यानर नट रेन्च — उच्च गुणस्तरको स्टिलबाट बनेको, सतह कडा हुने उपचार। रेन्चलाई भरपर्दो स्थायित्व बनाउनुहोस्।— ह्यान्डल ६.५" लामो छ। कुल लम्बाइको ६०% पुग्नुहोस्। ह्यान्डल चौडाइ १.२५" हो। धेरै हदसम्म ऊर्जा बचत गर्नुहोस्। (पन्जा लगाउन सिफारिस गरिन्छ।) - सतहमा कालो अक्साइड कोटिंग प्रयोग गरिन्छ। कडा जंग प्रतिरोध र प्रभावकारी रूपमा हातहरू स्क्र्याच गर्नबाट जोगिन। - पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य। यो कार, पाइप, साइकल मर्मत गर्न वा कार टायर प्रतिस्थापन गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।— कुल लम्बाइ 11.5 छ", चौडाई 2.5" छ। कुनै पनि उपकरण बक्स मा भण्डारण गर्न सकिन्छ। वा यसलाई पुच्छरको प्वालबाट झुण्ड्याउनुहोस्।
नट हटाउनको लागि गनस्मिथ रेन्च स्प्यानर
नट हटाउनका लागि गनस्मिथ रेन्च स्प्यानर — सबै १ 1/4â€ OD क्यासल नट र कमर्शियल क्यासल नट्समा फिट हुन्छ।— सामाग्री: हीट ट्रिटेड हाई कार्बन स्टिल / केस कडा र कालो अक्साइड लेपित — आयाम:7x3इन्च। - सामान्यतया प्लम्बिङ, पाइप फिटिङ, फिशिङ रड, सेफ, अटोमोटिभ सस्पेन्सन, hitchâ- OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
रेन्च स्प्यानर— समात्न सजिलो छ, त्यसैले यसलाई लामो समयसम्म समात्दा तपाईंले थकित महसुस गर्नुहुने छैन।— खिया रोक्नको लागि रेन्चको बाहिरी सतहमा कालो कोटिंग प्रयोग गरिन्छ। 4140 स्टिलमा सुपर कठोरता छ, जसले सबै प्रकारका स्क्रू र नटहरू सजिलै ट्विस्ट गर्न सक्छ। - रेन्च साइज 14.3 * 2.7 * 1.1 इन्च, वजन 1.19 Ibâ- विभिन्न पेच र नटहरू जस्तै कार, पाइप, मर्मत गर्न प्रयोग गरिन्छ। पाइप फिटिंग, साइकल, आदि।— OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
नट हटाउनका लागि नट रिंच
नट रिमूभलका लागि नट रेन्च— बलियो मिश्र धातु, कालो उपचार, खिया विरोधी।— प्लम्बिङ, पाइप फिटिङ, फिशिङ रड, अटोमोटिभ सस्पेन्सनका लागि प्रयोग— डबल एन्ड रेन्च डिजाइन, दुई कार्यका लागि एउटा उपकरण।— धेरै सजिलो रेन्च भित्र O घण्टीसँग झुन्डिन।— OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
चीनमा बनेको अनुकूलित गनस्मिथ रिंच कम मूल्य वा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। हाम्रा उत्पादनहरू CE प्रमाणित छन्। थप रूपमा, हाम्रा उत्पादनहरू टिकाऊ र सजीलो मर्मत योग्य छन्। Rotchi चीन मा एक प्रसिद्ध गनस्मिथ रिंच निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रा उत्पादनहरू डिजाइनमा फेसन मात्र होइन, उत्कृष्ट र फेन्सी पनि छन्। यसबाहेक, हामीसँग हाम्रा आफ्नै ब्रान्डहरू छन् र हामी बल्क प्याकेजिङलाई पनि समर्थन गर्छौं। यदि मैले अहिले अर्डर गरे भने, के तपाईंसँग स्टकमा छ? अवश्य! यदि आवश्यक छ भने, हामी नि: शुल्क नमूनाहरू मात्र होइन मूल्य सूची र उद्धरणहरू पनि प्रदान गर्नेछौं। यदि म होलसेल गर्न चाहन्छु भने, तपाईले मलाई के मूल्य दिनुहुनेछ? यदि तपाईंको थोक मात्रा ठूलो छ भने, हामी कारखाना मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। नवीनतम बिक्री, नयाँ, उन्नत, छुट र उच्च गुणस्तर गनस्मिथ रिंच किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा आउन तपाईंलाई स्वागत छ। तपाईं हामीबाट छुट उत्पादन किन्न आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं, यदि तपाई थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले हामीलाई अहिले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई समयमै जवाफ दिनेछौं!
ठेगाना: No.503, Guangboguomao, 1357 Yinxiandadao, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China
हाम्रो बन्दुक सफा गर्ने किट, बन्दुक सफा गर्ने, पिस्तौल सफा गर्ने किट, आदि वा मूल्यसूची बारे सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई तपाईंको इमेल छोड्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।
बन्दुक तेल को विशेषताहरु।2021/09/04
बन्दुकको तेलको मुख्य भाग सामान्यतया पोलिनिट्रोसिलिकन हो, जुन सामान्यतया मानव शरीरको लागि हानिकारक हुँदैन। वास्तवमा, बन्दुक ओइ ...
बन्दुकको मर्मत सम्भार।2021/09/04
बन्दुक मर्मतसम्भार समय अवधि भित्र गरिनु पर्छ। रोकथाम गर्न नियमित वाइप र तेल सिलहरू गरिनु पर्छ ...
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 Ningbo Rotchi Business Co., Ltd. सबै अधिकार सुरक्षित।